ရိုကျနှကျဆုံးမအပွဈပေးခွငျးဟာ ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျဖို့ ဘာ့ကွောငျ့ ဆိုးရှားသော နညျးလမျးတဈခု ဖွဈရသလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး (၅)ခု - Lifestyle Myanmar
Home Family ရိုကျနှကျဆုံးမအပွဈပေးခွငျးဟာ ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျဖို့ ဘာ့ကွောငျ့ ဆိုးရှားသော နညျးလမျးတဈခု ဖွဈရသလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး (၅)ခု
ရိုကျနှကျဆုံးမအပွဈပေးခွငျးဟာ ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျဖို့ ဘာ့ကွောငျ့ ဆိုးရှားသော နညျးလမျးတဈခု ဖွဈရသလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး (၅)ခု
ကိုယျထိလကျရောကျ အပွဈပေးခွငျးဟာ ပွောစကားနားမထောငျတဲ့ကလေးတှေ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ကလေးတှကေို ပညာပေးဖို့ မိဘတှေ သုံးနကြေ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ မိဘ ငါးယောကျမှာ အနညျးဆုံး ၄ယောကျလောကျက၊ အမေ ဖွဈစေ အုပျထိနျးသူဖွဈစေ ၁၀ကွိမျမှာ ၉ကွိမျလောကျက ဒီနညျးလမျးကို အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ တခြို့မိဘတှကေ ကိုယျ့ကလေးကို ခါးပတျကဲ့သို့သော လကျထဲမှာရှိတဲ့ အရာတဈခုခုနှငျ့ ရိုကျဖို့၊ တငျပါးကို လကျဝါးနှငျ့ ရိုကျဆုံးမဖို့ ဝနျမလေးပါဘူး။ သူတို့အနနေဲ့ ဒီလိုဆုံးမတာဟာ ကလေးကို မှနျကနျတဲ့လမျးကွောငျးပျေါ တငျပေးတာလို့ ထငျကွပမေယျ့ ၊သူတို့ရဲ့ လုပျရပျတှကေ အန်တရာယျမရှိလောကျဘူးလို့ ယုံကွညျကွပမေယျ့ သုတသေနမှာ ဒါက ကလေးကို ထိခိုကျပကျြစီးစယေုံသာမက ဒီနညျးလမျးက အလုပျမဖွဈဘူးလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှကေို ဒီလိုဆုံးမတာက ဘာအကြိုးဆကျတှေ ဖွဈလာစသေလဲ? ကလေးကို ဆုံးမတဲ့နရောမှာ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးက ဘာဖွဈမလဲဆိုတာ မိခငျ၊ ဖခငျတှေ သိရှိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဒါကအလုပျမဖွဈသလို ကိစ်စတှကေို ပိုပွီးဆိုးရှားစပေါတယျ
ကလေးဆိုတာ ပွောမရဆိုမရ တဇှတျထိုးလုပျတတျတဲ့အကငျြ့ရှိပွီး မိဘတှအေနနေဲ့ သညျးခံမှုအတိုငျးအတာက အကနျ့အသတျရှိတယျဆိုတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို ရိုကျနှကျဆုံးမလိုကျလို့လဲ ဘာမှအောငျမွငျလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ သုတသေနမှာ အကွမျးဖတျမှုက သူတို့လုပျမိလိုကျတဲ့ မကောငျးသော အပွုအမှု နောကျကှယျက အကွောငျးရငျးကို စိတျထဲမှာ တနုံ့နုံခံစားရစတောကွောငျ့ ကလေးတဈယောကျကို ဆုံးမပဲ့ပွငျဖို့ နညျးလမျးတဈခုအဖွဈ ရရှေညျမှာ အလုပျမဖွဈဘူးလို့ ပွသထားပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ သူတို့ရဲ့ အပွုအမှုတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ မသငျ့လြျောဘူးဆိုတာ ရှငျးပွခကျြတဈခု လိုအပျသလို ကလေးတှေ နားလညျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အကွမျးဖကျမှုက ကလေးရဲ့ လုပျရပျမြားကို ရပျတနျ့စဖေို့ အမွနျနညျးသာ ဖွဈပါတယျ။
၂။ ဒါက နှိပျစကျခံရတဲ့ ကလေးတဈယောကျ၊ ကွမျးတမျးတဲ့မိဘတဈယောကျ ဖွဈလာစဖေို့ လမျးကွောငျးပါပဲ
child abuse ဆိုတဲ့ ကလေးသူငယျ နှိပျစကျညငျးပနျးမှု အခွအေနအေမြားစုက လကျဝါးနှငျ့ ရိုကျဆုံးမခွငျးကနေ စတငျတယျလို့ သုတသေနက ဖျောပွထားပါတယျ။ ကိုယျထိလကျရောကျအပွဈပေးတာက အလုပျမဖွဈပါဘူး။ မိဘတှကေ အမြားအားဖွငျ့ သူတို့ကလေးတှကေို တဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျမက ရိုကျပါမြားရငျ လကျသံပိုပွောငျလာတယျ ပွောရမလိုပါပဲ။ ဥပမာ- မိဘက ဒါမလုပျနဲ့ဆိုတာကို လုပျလို့ ပထမတဈကွိမျ သငျ့ကလေးကို ရိုကျလိုကျတယျ၊ ဒါပမေယျ့ နောကျတခါ ထပျလုပျတယျ၊ နောကျတဈကွိမျရိုကျလိုကျရငျ နောကျတခါ သူတို့ထပျမလုပျတော့ဘူး၊ အမွဲတမျးစညျးကမျးရှိသှားမယျလို့ သငျ့မြှျောလငျ့ထားမိပါလိမျ့မယျ။ ရလဒျတဈခုအနနေဲ့ မိဘတှမှော ခှနျအားအသုံးပွုမှု မွငျ့လာပွီး အဆုံးသတျမှာ ဘယျတော့မှ စိတျမကူးထားတဲ့ နညျးလမျးဖွငျ့ ကိုယျ့ကလေးတှကေို နှိပျစကျညငျးပနျးသူ ဖွဈလာစပေါတယျ။
၃။ အကွမျးဖကျမှုက အနာဂတျမှာ ရနျလိုသူ တဈယောကျဖွဈစပေါတယျ
ငယျစဉျကလေးဘဝ တဈလြှောကျလုံး ကိုယျထိလကျရောကျ အပွဈပေးခံရတဲ့ ကလေးတှဟော သူတို့မိဘတှေ ဖွဈလာရငျ၊ ကလေးတှရေလာရငျ ဒီအကွမျးဖကျမှုနညျးလမျးကို သုံးလာနိုငျပါတယျ။ သုတသေနတှအေရ မိဘတှရေဲ့ ပွုစုပြိုးထောငျမှု မကောငျးခဲ့တဲ့ ကလေးငယျတှမှော ရုနျရငျးကွမျးတမျးတဲ့အပွုအမူတှေ ရှိလာနိုငျကွောငျးသိရပါတယျ။ သူတို့မှာ ဥပဒပွေဈမှုကြူးလှနျသူတှေ ဖွဈလာစနေိုငျတဲ့ အန်တရာယျမွငျ့မားပါတယျ။ မိဘတှစေကားက ကလေးတှနေားထဲ ရိုကျသှငျးသလိုဖွဈလာပွီး သူတို့ရဲ့ ဥပမာက ကလေးတှအေပျေါမှာ ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုတဈခု ရှိလာပါတယျ။ ဥပမာ- အမေ ဒါမှမဟုတျ အဖကေ ပဋိပက်ခတဈခုကို ဖွရှေငျးဖို့ ရိုကျနှကျခွငျးကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ ဒါကို ကလေး သငျယူပွီး ပွနျလုပျမှာဖွဈပါတယျ။
၄။ ကလေးတှဟော စိတျကရြောဂါကို စတငျခံစားရနိုငျပါတယျ
သငျ့အိမျထာငျဘကျက သငျ့ကို ရိုကျနှကျတယျဆိုပါစို့၊ သငျ့ကို ခဈြလို့ ရိုကျတယျလို့ သငျထငျပါသလား? ကလေးမှာလညျး အလားတူ တှကွေုံ့ရတတျပါတယျ။ သူတို့အပျေါမှာ ကိုယျထိလကျရောကျ ရိုကျနှကျခွငျးကွောငျ့ ကလေးဟာ အမနေဲ့ အဖရေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနှငျ့ ပတျသတျပွီး သံသယရှိလာပါတယျ။ ကလေးတဈယောကျရဲ့ ဘဝက မိဘတှကေို ဗဟိုပွုပေးထားတာကွောငျ့ သူတို့ကို လုံးဝမခဈြဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြ ခံစားရစပွေီး စိတျကရြောဂါ စတငျခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒါက သူတို့အတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈစပွေီး ကလေးတဈယောကျရဲ့ ပတျဝနျးကငျြနှငျ့ဝငျဆံ့မှု ဖွဈစဉျပျေါကို အကြိုးသကျရောကျစပေါတယျ။
၅။ ကလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ
အကွမျးဖကျမှုကို အမွဲတမျး မကျြမွငျတှနေ့ရေတဲ့ ကလေးတဈယောကျဟာ သူရဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို ဆိုးကြိုးသကျရောကျစတေဲ့ စိတျဖိစီးမှု ရလာနိုငျပါတယျ။။ ကိုယျထိလကျရောကျရိုကျနှကျမှုကို ပုံမှနျရငျဆိုငျရခွငျးဟာ ကလေးတဈယောကျအတှကျ ရောဂါ ပိုဖွဈစနေိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုလိုပါပဲ။ ပိုဆိုးလာရငျ ပွငျးထနျတဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကေိုတောငျ ကွုံတှရေနိုငျပါတယျ။
သညျးခံစိတျအတိုငျးအတာ ကုနျဆုံးလာတဲ့အခါ သငျဘာလုပျမလဲ
သငျ့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ပွနျစဉျးစားပါ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အပွုအမှုက သူ့အသကျအရှယျ၊ သူ့ဖှံ့ဖွိုးမှုအဆငျ့နှငျ့ ညီပါက ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ ကလေးအပျေါမှာ ဒီလောကျဒေါသထှကျသငျ့သလားပေါ့။ ဒါက သငျ့ရဲ့ ဒေါသစိတျကို နှောငျ့နှေးစပွေီး ဒီကိစ်စပျေါမှာ အပွုသဘောထားတှေ ဖွဈလာစပေါလိမျ့မယျ။
သငျက သူတို့ကို ဒီလိုမလုပျနဲ့ဆိုပွီး ထပျခါထပျခါပွောပမေယျ့ သူတို့မလိုကျနာဘူးဆိုရငျ
သငျက သူတို့ကို “ကောငျးကောငျးကစား”လို့ပွောတဲ့အခါ သငျ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဒါမှမဟုတျ သူဘာအမှားလုပျမိသလဲ? ဆိုတာ သိတယျလို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ? ဘာမှားနတောလဲ? ဆိုတာ အတိအကရြှိပါစေ။ ဥပမာ- “သမီး..ကိုကွီးကို သှားမဆိတျနဲ့ ၊အဲ့ဒါ နာတယျလေ” လို့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးပွောပါ။
တခြို့ကလေးတှကေ အျောဟဈပွီး မာမာထနျထနျပွောရငျ ပိုပွီးရှဲ့တတျတာကွောငျ့ အခွအေနကေို ပိုဆိုးစပေါတယျ။ ကိုယျ့ကလေးက ဒီလိုကလေးမြိုးဖွဈတယျဆိုရငျ မိဘအနနေဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျနပွေီး သူတို့နဲ့ မကျြလုံးခငျြးဆုံအောငျကွညျ့ပါ။ သငျ့အသံကို လြှော့ပွီးပွောပါ။
သငျ့ရဲ့ ကလေးဟာ ဒေါသအရမျးကွီးပွီး ဝုနျးဒိုငျးကွဲတတျသူဖွဈလြှငျ
အခနျးတဈခုထဲမှာ ထိုငျနရေမယျဆိုတဲ့ အပွဈပေးနညျးကို သုံးပါ။ တိတျဆိတျတဲ့နရောက သငျ့ကလေးကို တညျငွိမျစပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အပွုအမူက လကျခံနိုငျစရာ မဟုတျကွောငျးကို ရှငျးပွပေးပါ။ ၂မိနဈလောကျစောငျ့ပွီး သူတို့ငွိမျသှားပွီဆိုရငျ သှားကစားဖို့ ခှငျ့ပွုပေးပါ။ ပွနျပွီးတော့ ငွငျးခုံနတော၊ အျောဟဈနတောဆိုရငျ ၂မိနဈလောကျထပျပွီး အခနျးထဲမှာနခေိုငျးပါ။
သငျ့ရဲ့ သားကွီး သို့မဟုတျ သမီးကွီးက သငျ့စကားကို နားမထောငျခငျြဘူးဆိုရငျ
အရှယျရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ ကလေးအမြားစုက မိဘက ဒါမလုပျနဲ့ဆိုရငျ သိပျလကျမခံခငျြကွပါဘူး။ သူတို့ကို မထိခိုကျစမေယျ့ တခြို့ကိစ်စတှမှော ပွောမရ ဆိုမရဘူးဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ မကောငျးတဲ့ အပွုအမှုရဲ့ အကြိုးဆကျမြားကို ဖွဈပျေါခှငျ့ပေးလိုကျပါ။ ဒါက ခကျခဲပမေယျ့ သူတို့ဟာ သူတို့ အမှားတှထေဲကနေ လလေ့ာသငျ့ယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါမှသာ အမပွောတာ မှနျနပေါလား! လို့သူတို့သိလာပါလိမျ့မယျ။
ရိုက်နှက်ဆုံးမအပြစ်ပေးခြင်းဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ဘာ့ကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ခု
ကိုယ်ထိလက်ရောက် အပြစ်ပေးခြင်းဟာ ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးတွေ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ကလေးတွေကို ပညာပေးဖို့ မိဘတွေ သုံးနေကျ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိဘ ငါးယောက်မှာ အနည်းဆုံး ၄ယောက်လောက်က၊ အမေ ဖြစ်စေ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်စေ ၁၀ကြိမ်မှာ ၉ကြိမ်လောက်က ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့မိဘတွေက ကိုယ့်ကလေးကို ခါးပတ်ကဲ့သို့သော လက်ထဲမှာရှိတဲ့ အရာတစ်ခုခုနှင့် ရိုက်ဖို့၊ တင်ပါးကို လက်ဝါးနှင့် ရိုက်ဆုံးမဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ ဒီလိုဆုံးမတာဟာ ကလေးကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးတာလို့ ထင်ကြပေမယ့် ၊သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အန္တရာယ်မရှိလောက်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြပေမယ့် သုတေသနမှာ ဒါက ကလေးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေယုံသာမက ဒီနည်းလမ်းက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို ဒီလိုဆုံးမတာက ဘာအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာစေသလဲ? ကလေးကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ မိခင်၊ ဖခင်တွေ သိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဒါကအလုပ်မဖြစ်သလို ကိစ္စတွေကို ပိုပြီးဆိုးရွားစေပါတယ်
ကလေးဆိုတာ ပြောမရဆိုမရ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပြီး မိဘတွေအနေနဲ့ သည်းခံမှုအတိုင်းအတာက အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်လို့လဲ ဘာမှအောင်မြင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသနမှာ အကြမ်းဖတ်မှုက သူတို့လုပ်မိလိုက်တဲ့ မကောင်းသော အပြုအမှု နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို စိတ်ထဲမှာ တနုံ့နုံခံစားရစေတာကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ကို ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ရေရှည်မှာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ပြသထားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အပြုအမှုတွေက ဘာ့ကြောင့် မသင့်လျော်ဘူးဆိုတာ ရှင်းပြချက်တစ်ခု လိုအပ်သလို ကလေးတွေ နားလည်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုက ကလေးရဲ့ လုပ်ရပ်များကို ရပ်တန့်စေဖို့ အမြန်နည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒါက နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့မိဘတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေဖို့ လမ်းကြောင်းပါပဲ
child abuse ဆိုတဲ့ ကလေးသူငယ် နှိပ်စက်ညင်းပန်းမှု အခြေအနေအများစုက လက်ဝါးနှင့် ရိုက်ဆုံးမခြင်းကနေ စတင်တယ်လို့ သုတေသနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်ပေးတာက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ မိဘတွေက အများအားဖြင့် သူတို့ကလေးတွေကို တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်မက ရိုက်ပါများရင် လက်သံပိုပြောင်လာတယ် ပြောရမလိုပါပဲ။ ဥပမာ- မိဘက ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုတာကို လုပ်လို့ ပထမတစ်ကြိမ် သင့်ကလေးကို ရိုက်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်တခါ ထပ်လုပ်တယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်လိုက်ရင် နောက်တခါ သူတို့ထပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ အမြဲတမ်းစည်းကမ်းရှိသွားမယ်လို့ သင့်မျှော်လင့်ထားမိပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ မိဘတွေမှာ ခွန်အားအသုံးပြုမှု မြင့်လာပြီး အဆုံးသတ်မှာ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးထားတဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် ကိုယ့်ကလေးတွေကို နှိပ်စက်ညင်းပန်းသူ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
၃။ အကြမ်းဖက်မှုက အနာဂတ်မှာ ရန်လိုသူ တစ်ယောက်ဖြစ်စေပါတယ်
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ်ထိလက်ရောက် အပြစ်ပေးခံရတဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေ ဖြစ်လာရင်၊ ကလေးတွေရလာရင် ဒီအကြမ်းဖက်မှုနည်းလမ်းကို သုံးလာနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ မိဘတွေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှု မကောင်းခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ရုန်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုအမူတွေ ရှိလာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ သူတို့မှာ ဥပဒေပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်မြင့်မားပါတယ်။ မိဘတွေစကားက ကလေးတွေနားထဲ ရိုက်သွင်းသလိုဖြစ်လာပြီး သူတို့ရဲ့ ဥပမာက ကလေးတွေအပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခု ရှိလာပါတယ်။ ဥပမာ- အမေ ဒါမှမဟုတ် အဖေက ပဋိပက္ခတစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ ရိုက်နှက်ခြင်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဒါကို ကလေး သင်ယူပြီး ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ကလေးတွေဟာ စိတ်ကျရောဂါကို စတင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်
သင့်အိမ်ထာင်ဘက်က သင့်ကို ရိုက်နှက်တယ်ဆိုပါစို့၊ သင့်ကို ချစ်လို့ ရိုက်တယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား? ကလေးမှာလည်း အလားတူ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သူတို့အပေါ်မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့် ကလေးဟာ အမေနဲ့ အဖေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သံသယရှိလာပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝက မိဘတွေကို ဗဟိုပြုပေးထားတာကြောင့် သူတို့ကို လုံးဝမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက် ခံစားရစေပြီး စိတ်ကျရောဂါ စတင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့အတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေပြီး ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဝင်ဆံ့မှု ဖြစ်စဉ်ပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။
၅။ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်
အကြမ်းဖက်မှုကို အမြဲတမ်း မျက်မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ရလာနိုင်ပါတယ်။။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်မှုကို ပုံမှန်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဟာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ရောဂါ ပိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ ပိုဆိုးလာရင် ပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုတောင် ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။
သည်းခံစိတ်အတိုင်းအတာ ကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါ သင်ဘာလုပ်မလဲ
သင့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားပါ။ သင့်ကလေးရဲ့ အပြုအမှုက သူ့အသက်အရွယ်၊ သူ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နှင့် ညီပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ကလေးအပေါ်မှာ ဒီလောက်ဒေါသထွက်သင့်သလားပေါ့။ ဒါက သင့်ရဲ့ ဒေါသစိတ်ကို နှောင့်နှေးစေပြီး ဒီကိစ္စပေါ်မှာ အပြုသဘောထားတွေ ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။
သင်က သူတို့ကို ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဆိုပြီး ထပ်ခါထပ်ခါပြောပေမယ့် သူတို့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်
သင်က သူတို့ကို “ကောင်းကောင်းကစား”လို့ပြောတဲ့အခါ သင် ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဒါမှမဟုတ် သူဘာအမှားလုပ်မိသလဲ? ဆိုတာ သိတယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဘာမှားနေတာလဲ? ဆိုတာ အတိအကျရှိပါစေ။ ဥပမာ- “သမီး..ကိုကြီးကို သွားမဆိတ်နဲ့ ၊အဲ့ဒါ နာတယ်လေ” လို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါ။
တချို့ကလေးတွေက အော်ဟစ်ပြီး မာမာထန်ထန်ပြောရင် ပိုပြီးရွဲ့တတ်တာကြောင့် အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးက ဒီလိုကလေးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် မိဘအနေနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး သူတို့နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြည့်ပါ။ သင့်အသံကို လျှော့ပြီးပြောပါ။
သင့်ရဲ့ ကလေးဟာ ဒေါသအရမ်းကြီးပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲတတ်သူဖြစ်လျှင်
အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ထိုင်နေရမယ်ဆိုတဲ့ အပြစ်ပေးနည်းကို သုံးပါ။ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာက သင့်ကလေးကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူက လက်ခံနိုင်စရာ မဟုတ်ကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါ။ ၂မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး သူတို့ငြိမ်သွားပြီဆိုရင် သွားကစားဖို့ ခွင့်ပြုပေးပါ။ ပြန်ပြီးတော့ ငြင်းခုံနေတာ၊ အော်ဟစ်နေတာဆိုရင် ၂မိနစ်လောက်ထပ်ပြီး အခန်းထဲမှာနေခိုင်းပါ။
သင့်ရဲ့ သားကြီး သို့မဟုတ် သမီးကြီးက သင့်စကားကို နားမထောင်ချင်ဘူးဆိုရင်
အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးအများစုက မိဘက ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင် သိပ်လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ကို မထိခိုက်စေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေမှာ ပြောမရ ဆိုမရဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမှုရဲ့ အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါက ခက်ခဲပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့ အမှားတွေထဲကနေ လေ့လာသင့်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ အမေပြာတာ မှန်နေပါလား! လို့သူတို့သိလာပါလိမ့်မယ်။
Previous articleမွငျရုံနဲ့ မကျြရညျကစြတေဲ့ ညီအဈကို နှဈယောကျရဲ့ ကွညျနူးစရာ အဖွဈအပကျြလေး
Next articleပလကျစတဈအမှိုကျလြော့ခဖြို့အတှကျ ပလကျစတဈနဲ့ လူသုံးကုနျပစ်စညျးအမြိုးမြိုးလဲလှယျပေးတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျလေး